Vans Logo History | Famoronana an-tserasera
Tantaran'ny logo Vans
Ny Vans dia orinasa natokana indrindra amin'ny fanamboarana kiraro sy akanjo toy ny lobaka na t-shirt. Mifantoka amin’ny vondrom-piarahamonin’ny mpanao skate, ankoatra ny fanatanjahantena an-tanàn-dehibe hafa, no tena iantefan’ny mpihaino azy. Ny famantarana ny orinasa dia nanomboka tamin'ny fiandohan'ny orinasa fony izy io dia fivarotana fitaovana fotsiny tany amin'ny sekoly any Etazonia. Tamin'ny taona 70 vao noforonina ny famantarana voalohany an'ny orinasa.
Amin'izao fotoana izao, misy endrika maro samihafa amin'ny kiraro Old Skool malaza. Saingy tamin'ny voalohany dia modely telo amin'ny sneakers ihany no noforonina: manga, mena ary volamena. Tsy toy ny logo Vans, ity iray ity dia saika tsy niova hatramin'ny nanombohany. ankehitriny Lazainay aminao ny tantaran'ny logo Vans.
1 Tantara sy dikan'ny logo Vans
2 Logo endri-tsoratra sy loko
3 sary vans
Tantara sy dikan'ny logo Vans
Vans dia marika kiraro sy akanjo ara-panatanjahantena izay mandresy amin'ny tanora sy ny atleta. Ny tsiambaratelon'ny lazany dia mipetraka amin'ny filozofia marika, satria mifantoka amin'ny olona manana fomba fiaina mavitrika, toy ny skateboarders. Ity orinasa ity dia efa niasa hatramin'ny taona 1966. Avy amin'ny mpanorina Paul Van Doren ny tenany. Van Doren tany am-boalohany, nanao kiraro sambo. Inona no nahasarika ny sain'ny vondrom-piarahamonin'ny mpitaingina skate, satria tena tsara kalitao izy ireo ary mitambatra tsara amin'ny akanjo hafa. Tamin'izay no nanomboka nitombo be ny marika.
Ny kiraro Vans voalohany dia tsy nisy afa-tsy ny anaran'ny marika ho logo, ity dikan-teny ity dia naharitra 50 taona mahery, hatramin'ny 2016 rehefa nohavaozina ho fahatsiarovana ny 50 taona teo amin'ny tsena. Ny logo Vans dia noforonin'ny zazalahy 13 taona antsoina hoe Mark Van Doren, zanaky ny iray amin'ireo mpanorina.. Nipoitra ny hevitra rehefa nanao stencil izy mba handokoana amin'ny skateboard. Ny rainy, raha nahita ny zavatra nataony, dia nahatsapa ny sary noforoniny, ary nametraka izany teo amin'ny voditongotry ny kiraro. Taty aoriana, rehefa nanapa-kevitra ny hanolo-tena tanteraka amin'ny fanamboarana kiraro skate ny tompon'ny orinasa.
Ny hevitr'i Paul dia ny hamorona silhouette maoderina, maka aingam-panahy avy amin'ny Converse Chuck Taylor. Te hamorona karazana kiraro tsy solafaka izy ireo ary hifikitra tsara amin'ny karazan-tany rehetra. Ny modely voalohany dia $2.49 sy $4.99 ihany.
Ny fandikana ara-bakiteny ny logo dia avy amin'ny teny hoe «Furgonetas«. Ny logo dia mirakitra "V", ny litera "A", "N" ary "S", toy ny hoe fakany efamira. Inona no mahatonga azy io ho singa hita maso miavaka indrindra amin'ny marika. Mba hahatakarana bebe kokoa ny tantaran'ny marika dia tsy maintsy miverina any amin'ny taona 70. Nifanditra ny mpitaingina skate roa, Tony Alva sy Stacy Peralta. Ny voalohany dia nankalaza fa nahavita nivadika tamin'ny rindrina izy ary nanidina eny amin'ny rivotra. Lehilahy iray antsoina hoe Skip Engblom tao no niteny ara-bakiteny hoe: "Ralehilahy, vao avy nivoaka ny rindrina ianao."
Logo endri-tsoratra sy loko
Tsy nampiasaina nandritra ny fotoana ela ny sary skateboard. Nantsoina hoe sokatra izy io, satria mitovy amin’ny akoran’ny biby ny bikany. Tamin'ny faran'ny taona 2016, nisafidy ny hanafoana ny marika skateboard izy ireo ary ny lahatsoratra miaraka amin'ny marika ihany no navela. Ny kiraro natao tamin'ny taona 60 dia nisy marika fotsy misy soratra manga. Tamin'ny taona 2016 izy ireo dia nisafidy ny loko mena ho an'ny lamosina ary fotsy ho an'ny typography. Ny mena dia maneho hery sy fitiavana. Raha ny fotsy kosa dia misy dikany amin'ny fahatoniana sy ny fahadiovana. Ireo loko ireo dia matetika ampiasaina hamoronana ny filàna ilaina amin'ny mpanjifa. Eo ambanin'ny famantarana ny marika "Off the Wall".
Tany am-boalohany dia tsy mitovy ny litera amin'ny logo, fa ny mpamorona dia namorona asymmetrika. Ny endri-tsoratra ampiasaina amin'ny fango Vans dia dika novaina amin'ny endritsoratra Helvetica.. Ny litera rehetra dia atao amin'ny kapitaly, mamorona zoro havanana. Amin'izao fotoana izao, ny logo Vans dia iray amin'ireo malaza sy malaza indrindra amin'ny indostrian'ny kiraro manerantany.
Ny tena mampiavaka an'ity orinasa ity dia ny singa sary miaraka amin'ireo modely kiraro samihafa, ny iray amin'izy ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe "Jazz Stripe". Tany am-piandohana dia nanomboka ho doodle izy io, saingy nifarana ho marika voasoratra anarana an'ny orinasa. Ny singa iray hafa miavaka dia ny lamina misy marika izay ananan'ny modely amin'ny sneaker maromaro, zavatra izay ezahan'ny marika hafa haka tahaka. Voalaza ihany koa fa ny endrika geometrika ananan'ny Vans tokana dia avy amin'ny "Star of David" malaza, iray amin'ireo marika jiosy tena izy, saingy tsaho fotsiny izany.
Raha tianao ity lahatsoratra ity ary tianao ny mahafantatra ny tantaran'ireo logos malaza indrindra, ity ny rohy mankany amin'ny lahatsoratra hafa izay lazaiko aminao ny tantara momba ny logo malaza Amazon.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tantaran'ny logo Vans
Ahoana ny fomba hanaovana brochure